Jekiseni Kuumbwa - Chapman Technology Co., Ltd.
Chikamu chinobudirira chinotanga neforoma yakanyatsogadzirwa. Aya maitiro akaomarara uye akasarudzika anogadza chikamu chemugadziriro uye mutengo wehupenyu hwecycle uye unofunga nezvezvakakosha zvikamu zveforoma dhizaini uchiomerera kune yakasarudzika chikamu chikamu.
Inofungidzirwa imwe yeKiyi Kiyi dzeKubudirira, yakakodzera dhizaini dhizaini uye kuvaka chivakwa kunobatsira kudzikisa mutengo, kuwedzera mhando uye kugadzirisa mashandiro. Chapman Muitikambani inogona kutsigira akasiyana siyana software dhizaini kunyorera, kusanganisira UG, PROE, CAD, SOLIDWORKS zvichingodaro. Ehe, isu tinogona kukupa iwe nemhando dzakasiyana dzeforoma dhizaini zviyero: DME, HASCO, MEUSBURGER, LKM, pamwe neiyo moldflow ongorora kuongorora ese maforoma dhizaini uye zvikamu zvisati zvaitika.
Chapman Muiti Kuumbwa zvivakwa zvinopa mukana wekumhanya mukumhanya ese marudzi e thermoplastic zvinhu. Isu tinogadzira mukugadzira zvigadzirwa zvehuwandu hwakawanda hwekushandisa pamwe nemaindasitiri akasarudzika anosanganisira Mota, zvekurapa, zvemagetsi zvigadzirwa, zvinongedzo, maindasitiri, kudzivirira, kutakura, uye mutengi.
Chapman Muiti Kambani ine jekiseni muchina kubva pamakumi mapfumbamwe kusvika mazana matanhatu ematani, Tinogona kukubatsira mukugadzirisa uye kugadzirisa chigadzirwa chako dhizaini kuti uwane zvakanakisa mhedzisiro yekusangana nezvinodiwa zvako.
Core richigadzirisa nezvaanogona
1.Large kunzwisisa richigadzirisa
2.Small nemazvo Kuumbwa
3. Insert Kuumbwa uye Over Kuumbwa
4.LSR & Rubber Kuumbwa
Chikwata chedu pa Chapman Muitishanda pamwe chete nevatinoshanda navo bhizinesi kuti tiwedzere huwandu hwehumhizha hweindasitiri inotungamira yakaoma zvikamu. Pazasi pane mashoma eaya akakosha ekuwedzera masevhisi:
• Multi-Chikamu Assemblies
• Kugadzira Mould & Kugadzirisa
• Mold Kuendesa Chirongwa uye Maitiro
• Kanban, Stocking Zvirongwa, nezvimwe.
• Batsira mukutsvakirazve kuedza
• Chikamu Kushongedza
• Tsika Colors uye Inokurumidza Shanduko Ruvara